तीन बाबु–छोराबाट १५ वर्षीया बालिका पालैपालो बलात्कृत | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
तीन बाबु–छोराबाट १५ वर्षीया बालिका पालैपालो बलात्कृत
प्रकाशित मिति ७ मंसिर २०७५, शुक्रबार १२:३० लेखक नेपाली जनता
झापा । एक अपाङ्गता भएकी १५ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा झापाको गौरादह नगरपालिकाबाट तीन बाबु–छोरासहित चार जना पक्राउ परेका छन् ।
उनीहरूलाई पीडित बालिकाकी आमाले दिएको जाहेरीका आधारमा पक्राउ गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय दमकका प्रहरी निरीक्षक अमरबहादुर थापाले जानकारी दिएका छन् । राम्रोसँग बोल्न नसक्ने बालिकालाई उनीहरूले विभिन्न मितिमा बलात्कार गरेको प्रहरी निरीक्षक थापाले बताए ।
उनीहरूले बालिकालाई आफ्नो घरमा, नजिकैको बाँस झ्याङमा र एक पटक बालिकाकै घरमा जबरजस्ती करणी गरेका थिए । घरमा पीडित बालिका र उनकी आमा बस्दै आएका छन् । बालिकाको बुबा घरमा नभएको प्रहरीले जनाएको छ ।
उनीहरूले बालिकालाई पैसासहित विभिन्न प्रलोभन देखाएर पटक पटक बलात्कार गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । भिन्ना भिन्नै व्यक्तिबाट पटक पटक बलात्कृत हुँदा बालिकाले घटनाबारे आमालाई सुनाएकी थिइन् । बालिकाकी आमा पनि सुस्त श्रवणकी छन् ।
अति विपन्न र केही नजान्ने परिवारका पीडित ढिला गरी मात्र प्रहरी कार्यालयमा आइपुगेका थिए । स्वास्थ्य परीक्षणपछि पीडित बालिकालाई दमकस्थित आफन्तको शरणमा राखिएको छ । पक्राउ परेका चारै जनाविरुद्ध जबरजस्ती करणी अभियोगमा मुद्दा चलाएको प्रहरी निरीक्षक थापाले बताएका छन् ।
अर्बौं घोटलामा मुछिएकी कामिनीमाथि अख्तियारले थाल्यो कारबाही
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले फोर जी सेवा विस्तारको नाममा करोडौं रकम घोटला गरेको खुलेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन…
वि.स.२०७५ साल जेष्ठ १६ गते । बुधबार । ईश्वी सन् २०१८ मे ३० तारिख । नेपाल सम्बत् ११३८ ।…
वित्तीय क्षेत्रमा बदनाम एनबी समूहको अस्तित्व यसरी समाप्त हुँदैछ
काठमाडौं । नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताहरूको चर्चा गर्दा एनबी समूहलाई निकै गन्हाएको समूहको उपमा दिइन्छ । नेपाली…
उफ् यो गर्मी !
काठमाडौं । जेठको अन्त्यसँगै देशका सबै क्षेत्रमा गर्मी अत्याधिक बढेको छ । राजधानी काठमाडौंमा पनि शनिबार यस वर्षकै उच्च…
तपाईलाई थाइराइड भएको हुनसक्छ ?
अत्याधुनिक, व्यस्त तथा बद्लिंदो जीवनशैलीका कारण आजभोलि थाइराइड सामान्य बिमारी बनेको छ । पुरुषहरुको तुलनामा यो रोगबाट महिलाहरु बढी…